Ngaba uMqeshi wakho unokukuChola emsebenzini? | Izisombululo ze-OMG
Ukujongwa koMsebenzi eMsebenzini:
Kule mihla, kunokwenzeka ukuba umqeshi okanye umthengi wakho akugcine uphonononge iikhamera ezifihliweyo okanye iiGPS Trackers okanye iRekhodi yelizwi. Itekhnoloji yakutshanje yenze ukuba kube lula ukugcina iliso kubasebenzi ngokusebenzisa iikhamera ezifihliweyo okanye iRekhodi yelizwi okanye i-GPS Trackers. Abaqeshi banokubeka esweni abasebenzi ngokwahluka kweendlela - kodwa kufuneka benze njalo ngendlela enokuthenjwa neemfuno ezininzi zomthetho.
Uninzi lwabaqeshi luya kukhetha ukubukela ukusetyenziswa kweefowuni kunye neenkqubo ze-IT ngabasebenzi bazo, kwaye kumacandelo athile, abaqeshi baya kusebenzisa umkhondo wezithuthi kunye ne-CCTV kunye nezinye iindlela zokubeka esweni iimpahla zabo / iimveliso / izakhiwo. Kule nqaku, siza kugxila ekuqwalaselweni ngekhamera efihliweyo, i-GPS Trackers, kunye neRekhodi yelizwi.
Njengoko itekhnoloji iqhubela phambili ezinye iinkampani ziye zihambele phambili njengokufaka abasebenzi babo ngetekhnoloji yale mihla yeekhamera ezifihliweyo, iiGPS Trackers kunye nerejista yezwi. Kwizixhobo zethu zakutshanje ndwendwela iwebhusayithi yethu.
Izizathu zovavanyo lwabasebenzi ngabaqeshi:
Abaqeshi banokukhetha ukugcina abasebenzi bephononongwa ngaso nasiphi na isizathu kwezi zilandelayo:
Ukukhusela abasebenzi okanye amalungu oluntu, umzekelo, ezempilo nezokhuseleko, ukuthintela ubundlobongela nokuphangwa kwempahla, ukugcina ucwangco eofisini nakwamanye amaziko oshishino.
Ukujonga ukungaziphathi kakuhle, ukwaphula umthetho, okanye ukubiwa, okanye ubuqhetseba bezinto ezinobunkunkqele kunye nokufihlwa kweshishini, ngabaqeshwa okanye ngamalungu oluntu kwaye uqiniseke ukuba imigaqo-nkqubo yenkampani ayaphulwanga.
Ukukhusela iimfuno zeshishini.
Ukuqinisekisa umgangatho weenkonzo zabathengi (ezinokuqaqambisa iimfuno zoqeqesho zabasebenzi) kunye nokuvavanywa kunye nokuphuculwa kwemveliso. Ukuqinisekisa ukuba izikhalazo zabathengi ziyasonjululwa.
Ukuthobela unyanzeliso olusemthethweni kunye nolawulo, kwaye ubophelele abasebenzi ukuba balandele imigaqo nemigaqo yombutho.
Ukuqinisekisa unxibelelwano umzekelo i-imeyile, ukusetyenziswa kwe-intanethi, kunye neefowuni zisebenza kuphela kwishishini.
Abaqeshi beenkampani ezinkulu baya kuba noMgaqo-nkqubo wezeNtlalontle oquka ukubeka iliso ekusetyenzisweni kwabasebenzi kwiiwebhusayithi zonxibelelwano (kwiphepha lenkampani leendaba losasazo lomntu okanye kwiphepha leendaba laseburhulumenteni). Abaqeshi abaliqela baya kuba ne-IT kunye noMgaqo-nkqubo wezoNxibelelwano ochaza indlela abasebenzi abanokuthi bazisebenzise ngayo iinkqubo zabo (ezinokubandakanya ukusetyenziswa kweetafile ezingabanini beNkampani kunye neesoftware kunye neenkqubo zokuzisa isixhobo sakho-eyakho. Sineemveliso ezikumgangatho ophezulu zokujonga nzulu ngeenkcukacha Cofa apha.
Imithetho ye-United Kingdom malunga nophando:
IMithetho yase-United Kingdom malunga noPhononongo lubandakanya:
UMmiselo woMthetho wokuPhanda ngaMandla we-2000 (RIPA) kunye ne-2016
IMigaqo yoNxibelelwano ngeNxibelelwano i-2000 (Ukuziqhelanisa noMthetho kwiShishini)
Imigaqo yoKhuseleko lweDatha ngokubanzi i-2018 kunye noMthetho woKhuseleko lweDatha 2018-Abaqeshi kufuneka basebenze belandela i-GDPR kunye ne-DPA kunye nemigaqo-nkqubo emithandathu ephambili.
Imfuneko yomthetho ebekiweyo yokuthenjwa kunye nokuzithemba okuxhasayo phakathi komqeshi nomsebenzi unxulumene-Abaqeshi akufuneki basebenze ngaphandle kwesizathu esivakalayo nesifanelekileyo, ngendlela enokutshabalalisa okanye yonakalise ubudlelwane bokuthembana kunye nokuzithemba phakathi kwabo kunye nabo abasebenzi.
Nangona kunjalo, umThetho wamaLungelo oluNtu i1998 nayo ithatha inxaxheba kwisikhundla esibalulekileyo apha njengoko inika abantu ilungelo lokuba nemfihlo kwaye nemithetho yase-United Kingdom izama ukuqaphela ukuba abasebenzi banokuziva ngathi ukubek 'esweni ngumqeshi wabo emsebenzini kuyaphambuka.
Ke ngoko, abaqeshi bafuna ukufumana ibhalansi phakathi komqeshwa ofanelekileyo wokuba ngabucala kunye nemicimbi yabaqeshi xa bebukele abasebenzi babo, nangayiphi na indlela; kufuneka kwakhona kubekho isizathu esivakalayo sokubek'esweni.
Ngenxa yesidingo sale bhalansi, imithetho yase-United Kingdom ekhoyo yahlula phakathi:
Ujoliso ekujoliswe kulo (lomntu omnye) kunye nokujonga okwenziwa ngendlela ecwangcisiweyo (apho bonke abasebenzi okanye amaqela abasebenzi ahlala eqwalaselwa ngokufanayo)
Vula kwaye ufihle ukubonwa
Ukujongwa konxibelelwano esele lufikelelekile kunye nokujonga okanye ukunqunyulwa konxibelelwano lwe-elektroniki olungafikelelekiyo (umz. Ukufikelela kwi-intanethi, iifeksi kunye neefowuni). 'Ukwahlula phakathi' kwenzeka xa iziqulatho zonxibelelwano zisenziwa zifumaneke komnye umntu ngaphandle komthumeli okanye umamkeli. Umthumeli kunye nomamkeli zonxibelelwano kufuneka avume ukunxibelelana ukuze oku kube semthethweni. 'Ukungenelela' kugunyaziswe ngokusemthethweni phantsi kwemithetho ye-RIPA kunye ne-LBP (apha ngasentla).
Zonke ezi ntlobo zovavanyo zinokusemthethweni.
Ke ngoko xa abaqeshi bemisela iinkqubo zokuhlola (kufuneka baqinisekise ukuba zisemthethweni):
Yenza uvavanyo 'lwefuthe'ukuqinisekisa ukusetyenziswa kweKhamera efihliweyo / abaKhangeli beGPS / ukurekhodwa kwelizwi / ukujonga esweni- esichaza isizathu sokujonga kunye nenzuzo enokubakho kunye neempembelelo ezingathandekiyo; jonga kwezinye iindlela apho kunokufezekiswa khona injongo; jonga iimfuno eziza kwenzeka ekubekeni esweni umz. ukwazisa abasebenzi, ukulawula idatha, izicelo zokufikelela kwisifundo (SAR) ngabasebenzi; ingaba isigqibo sisengqiqweni na (xa kuthelekiswa neziphumo ezibi ezinokubakho kubasebenzi
Xelela abasebenzi isizathu, ubungakanani, kunye nohlobo lojoliso lovavanyo olunokwenzeka. Abasebenzi abawehli amalungelo abo abucala xa behamba ngeminyango yoMqeshi kwaye oku akufuneki kungananzwa nelungelo labaqeshi lokuqinisekisa ukuba abasebenzi abazibandakanyi ekuziphatheni kakubi.
Qinisekisa ukuba uphononongo luhambelana neshishini kunye nezixhobo ezongiweyo ngokuyinxenye okanye zinikezelwe ngokupheleleyo emsebenzini
Cacisa ukuba ngawaphi amanqanaba abucala umqeshwa anokucinga okanye angawacingeli xa esebenzisa iinkqubo zabaqeshi ukwenza unxibelelwano lwabucala, kwaye xa usebenzisa amagumbi okuphumla okanye ekwaphula iindawo eziphantsi koliso
Nika umnxeba ongacwangciswanga ukuba abasebenzi bawusebenzise kwiimeko zikaxakeka ukuba zonke ezinye iifowuni zirekhodwe / zibekwe esweni.
Cacisa ukuba ngawaphi amanqanaba e-imeyile / i-intanethi / ukusetyenziswa kwefowuni ngumqeshwa ngenxa yezizathu zabucala ezivunyelweyo nezingavumelekanga
Nika iiakhawunti zomgaqo-nkqubo ezibhaliweyo malunga nophando
Chaza ukuba umphathi uza kuyisebenzisa njani ulwazi olufunyenwe ngokujonga. Umsebenzi unokwazi ukuba iikhamera ezifihliweyo, ii-trackers ze-GPS, irekhoda yezwi ikhona, umzekelo, kodwa oku akunakuqinisekisa ukuba umqeshi usebenzisa iKhamera efihliweyo, iTrack tracker, kunye neRekhodi yelizwi kwinkqubo yoluleko ukuba umsebenzi akakhange axelelwe ukurekhodwa kwevidiyo ingasetyenziselwa loo njongo. Umzekelo - umsebenzi unelungelo lokuthatha ikhamera efihliweyo, umkhondo we-GPS, isixhobo sokurekhoda ngezwi uya kusetyenziselwa izizathu zokhuseleko ngaphandle kokuba uxelelwe ngenye indlela.
Qinisekisa ukuba abo babandakanyekayo ekubekweni esweni bayaziqonda iimbophelelo zabo zangasese
Chaza ukuba olu lwazi luzakusindiswa njani kwaye luqhubekeka njani ngokulandela iGDPR kunye noMthetho woKhuselo lweDatha, kwaye ngubani onofikelelo kolu lwazi
Bayeke abasebenzi bavakalise naluphi na uloyiko abanalo, ngokuzithemba, kwaye baqiniseke ukuba banikwa ithuba lokuchaza okanye bacele umngeni kuye nakuphi na ukurekhodwa kwevidiyo esetyenzisiweyo njengenxalenye yenkqubo yoluleko.
Ujoliso ekujolise kulo:
Ngokwesiqhelo, ukubek'esweni kufuneka kwenziwe kuphela ngumqeshi ngokucacileyo nangokucwangcisiweyo, ngaphandle kokuba kujolise / kunye / okanye ukubek'esweni okuyimfihlo kufanelekile.
Ujoliso olujolisiweyo / oluyimfihlo ngokubanzi luya kuba yinto efanelekileyo kuphela kwiimeko ezizodwa, apho kukho izizathu zokurhanela isenzo solwaphulo-mthetho okanye isenzo esingafanelekanga somqeshwa esikuyo kwaye ukubek'esweni kubalulekile ukuthintela okanye ukufumanisa ulwaphulo-mthetho okanye ukungalunganga, apho kungekho enye indlela efanelekileyo .
Uqwalaselo olunje kufuneka lwenziwe kuphela ngexesha elibekiweyo kwaye njengenxalenye yophando oluthile nokuba isoyikiso sokuphazamiseka kwabasebenzi 'abamsulwa' sithathelwa ingqalelo, umzekelo, ukubekwa kweliso kufuneka kugxilwe kunqabile kwaye kube nefuthe kubantu abambalwa. Olu phononongo kufuneka kwakhona lukhankanywe njengokubalulekileyo kumngcipheko weenkcukacha zabaqeshi okanye umgaqo-nkqubo wabucala. Olu hlolisiso luya kuhlala lukhokelela kwindibano yoluleko apho umqeshi acinga ukuba umsebenzi waphule imigaqo-nkqubo yenkampani.
Ukuba olu phononongo lujolise ekuboneleleni ulwazi ngokungazi ngabom bokuziphatha gwenxa kwabanye abasebenzi, obu bungqina akufuneki busetyenziswe ngokuchasene nabasebenzi ngaphandle kokuba kuyimeko yokuziphatha kakubi komntu. Apho ukungaziphathi kakuhle kuncinci, ukusetyenziswa kwevidiyo eyimfihlo 'efihlakeleyo' ukurekhoda umsebenzi kuya kuvunyelwa.
Idatha yobuqu eqokelelwe kuqononongo kufuneka ibe yezezizathu ezifanelekileyo kwaye ayinakusetyenziselwa enye injongo kunokuba bekucwangcisiwe kwasekuqaleni.
Iwotshi yabasebenzi ngaphandle kwendawo yokusebenza inokuphinda ibe kufanelekile ukuba umqeshi angabonisa ukuba kufanelekile (banezizathu ezivakalayo zokubonisa ukuba umqeshwa ubandakanyeka kukungaziphathi kakuhle okanye imigaqo-nkqubo yenkampani) kwaye ngokomda (umqeshi akakhange aqhubele phambili. kunokuba ibalulekile ekusebenziseni kwayo umkhanya).
Okona kubalulekileyo, nakuphi na ukubekwa esweni okwenziwa ngumqeshi kufuneka kuhambelane nenkxalabo yomqeshi afuna ukuyenza.
NgoMeyi 25, 2018, xa i-GDPR sele ingumthetho, iOfisi yoMkomishinala woLwazi iqinisekisile ukuba ukubekwa esweni ngokufihlakeleyo kwabasebenzi kungavunyelwa kuphela kwiimeko ezingagungqisiyo xa uhlaziya umsebenzi obandakanyekayo kungonakalisa ukuphepha okanye ukufunyanwa kolwaphulo-mthetho. Abaqeshi banokuxhomekeka kwisixhobo sethu esikumgangatho ophezulu ukubekwa kweliso kubasebenzi, cofa apha ukufumana iinkcukacha ezithe kratya.
Isifundo malunga neMeko:
Umbutho waseGateway Community ngokuchasene neAtkinson, kwityala lowama-2014, iTrayi yeSibheno seNgqesho yabamba ukuba uMqeshi ofumanisa ii-imeyile zomqeshwa, ngexesha lophando lokohlwaya isimilo somqeshwa, ayikhange ibe kukungenelela ngokungafanelekanga kubomi babasebenzi bomntu-- Umqeshwa wayengenathemba lokuba umntu uza kwenza izinto eziyimfihlo kwiimeko apho wayethumele ii-imeyile kwiakhawunti yakhe yomsebenzi esaphula umgaqo-nkqubo we-imeyile (awayewuchazile kwaye enoxanduva lokuwunyanzelisa!) ngasese '.
Inyaniso yokuba uMnu Atkinson wayesebenzise inkqubo ye-imeyile ngokuchasene nomgaqo-nkqubo we-imeyile yoMbutho yafunyanwa ngenxa yophando olusemthethweni kwindlela aziphethe ngayo. Abaqeshi kufuneka baqinisekise ukuba abasebenzi banokuba nethemba lokuba baya kusebenza bodwa xa umphathi engenayo 'i-imeyile kunye noMgaqo-nkqubo wokuSebenzisa i-Intanethi (okanye efanayo) eyaziswa bonke abasebenzi.
Kwasekuqaleni kwe-2018, izigqibo ezibini zinikezelwe yiNkundla yaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu (i-ECHR):
In IMontenegro xa ithelekiswa neAntovic kunye neMirkovic, i-ECHR igwebe ukuba kukwaphulwa kwamalungelo amabini okugcina ubumfihlo phantsi kwemithetho yamaLungelo oluNtu, ukufaka ikhamera zokujonga kwiiholo zabafundi (ngenxa yesizathu sokugada iipropathi nabantu kunye nokubukela ukufundisa). I-ECHR ithe 'ubomi babucala' bunokubandakanya imisebenzi yobugcisa eyenzeka kwindawo kawonkewonke (i -holo yeholo), kwaye umqeshi akanasizathu saneleyo sokuhlolwa njengoko kwakungekho bungqina bokuba impahla okanye abantu basemngciphekweni.
Kwimeko yeSpanish ye ILopez Ribalda kunye nabanye v eSpain, i-ECHR yafumanisa ukuba ukusetyenziswa kweekhamera ezifihliweyo zevidiyo kwivenkile enkulu yokubukela abaphangi abarhanelwa ngabasebenzi benyhasha amalungelo abo abucala phantsi kweNqaku 8 ye-European Convention yamalungelo oluntu.
Ngo-2009, emva kokubona ukungahambi kakuhle phakathi kwamanqanaba esitokhwe kunye nentengiso ebixabisa i-20,000 XNUMX euros ngaphezulu kweenyanga ezininzi, ivenkile enkulu, kunye nekhamera ebonakalayo yeCCTV, yafaka iikhamera ezifihliweyo emva kwedesika yomthengi kuzo zonke iivenkile. Abasebenzi abahlanu banqunyanyiswa emsebenzini kamva emva kokuba iikhamera zokujonga ziye zababona beba (okanye bencedisa abanye abasebenzi okanye abathengi ukuba bebe). Abasebenzi bathi amalungelo abo okhuseleko lwedatha kunye namalungelo obumfihlo aphulwe kukusetyenziswa kweerekhodi eziyimfihlo.
Iinkundla zaseSpain zachasa zaza zatsho ukuba ukupheliswa komthetho kufanelekile. I-ECHR ayivumelani kwaye yathi iiNkundla zaseSpain aziphumelelanga ekuxabiseni ukulingana phakathi kwelungelo labucala lokuba ngasese nelungelo lomqeshi lokuzikhusela ishishini lakhe - bebengaxelelanga abasebenzi ngokufakwa kweekhamera ezifihliweyo, kwaye bonke abasebenzi baqwalaselwa ngaphandle komda wexesha.
I-ECHR ivakalelwa kukuba ukubekwa esweni ngokufihlakeleyo yayiluphazamiso kubomi babo bobuqu, njengoko abo basebenza imali bengakwazanga ukuphepha ukufotwa njengoko kunyanzelekile ukuba benze ingxelo emsebenzini. I-ECHR ithe ukuba bathobele umthetho wokugcina idatha, abasebenzi kufuneka bavuleleke ekuchazeni ngokuchanekileyo nangokungaqinisekanga ngokubeka esweni kunye nenjongo yokubekwa kweliso. Akukho nto iyakwenziwa malunga nokubekwa esweni ngaphandle kwemvume yomqeshwa.
Ukuba ungumqeshi kwaye udinga izixhobo ezisemgangathweni zokujonga abasebenzi bakho unokufumana izibonelelo kwiimveliso eziphezulu. Ngeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu Cofa apha.
5057 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-11 Namhlanje